Mpanamboatra Solika metaly haingon-trano - Mpanamboatra vahaolana vahaolana vita amin'ny haingon-trano any China, orinasa
Vahaolana mitam-bika otomatis
Z-vy vita amin'ny vy stainless vy fantsom-bolo mesh conveyor fehikibo
Z endrika vy miendrika vy fantsona mesh conveyor fehikibo, fehikibo ifotony misy fehikibo marobe azo ampiasaina amin'ny fitaovana maro isan-karazany, ny mahazatra dia stainless steel 304. Ny fitaovana hafa misy dia misy: stainless vy 316, vy karbonina isan-karazany, ary fitaovana fampiasa amin'ny hafanana avo lenta.
Lamba lamba vita amin'ny metaly
Ny sequins mesh dia ifandraisan'ny sequins marobe (misy sampana 4) ary peratra, toa toy ny hala, ny 'tongotra' tsirairay ao amin'ny sequin dia miasa ao anaty peratra ary miforitra miverina mba hahazoana antoka izy ireo mifampiantso.
Alumni rojo vy vy
Araka ny fangatahana lamaody lamaody, ny rojo haingon-trano miavaka sy miavaka manokana dia manintona ny mason'ny olona.
Io varavarana lamba io tsy manam-paharoa io dia namboarina tamin'ny rohy mifono 13mm izay mora ampiarahina fantsom-bika konody ary esorina. Ireto misy antsipiriany momba ny efitra lamba vita amin'ny rojo fandraisam-bahiny ho fanondroana.
Solika vy coil
Ity karazana vy vita amin'ny vy toy ny fefy mampifandray amin'ny rojo vy, dia ampiarahin'ny tariby marobe marobe, ny halavan'ny tariby dia ny haavon'ny ridao, ary azontsika atao amina sehatra rehetra irinao.